Maxkamadda Garowe oo maanta riday xukunno bilaa qareen ah – Hornafrik Media Network
Maxkamadda derejada koowaad ee gobolka Nugaal, ayaa maanta oo sabti ah dhegaysatay, gar-maqalkii u horreeyay ee kiiska Hodan Shanleyste oo kufsi iyo dil loogu gaystay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Maxkamadda ayaa maanta la hor geeyey todoba nin oo ku eedaysan kufsi iyo dil11-kii bishii Apriil ee sanadkii tegay magaalada Garowe loogu gaystay Hodan Axmed Shanleyste oo ahayd haweeney xaas ah.
Xeer Ilaalinta Puntland ayaa eedeymaha loo heysto ragaas ka hor akhrisay maxkamadda, waxayna intaa kadib go’aamisay in kiiskaas mar kale loo fariisto 22-ka bishan Febraayo.
Isla maanta maxkamadda derajada koowaad ee Puntland waxaa la hor geeyey dhalinyaro kale oo ku eedeysay dembiyo kala duwan, waxaana qaar ka mid ah lagu riday xukunno, iyadoo qaar kalena dib loo dhigay dhageysiga kiisaska ay ku eedeysanyihiin.
Kiisaska la xukumay maanta waxaa ka mid ahaa nin ay maxkamaddu ku heshay kiis kufsi ah kaas oo loo geystay gabar da’ yar, waxaana lagu xukumay ninkaas, 5-sano oo xabsiya, 1,000 dollar oo ganaax ah iyo meherka gabadha oo gaar ah.
Xukunada ay riday maxkamadda derajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa ku soo aadeysa iyadoo maanta qareenada ka how-gala magaalada Garowe ay shaqa joojin ku dhawaaqeen, kadib mar ay cabasho ka muujiyeen lacago dheeraad ah oo ay sheegeen inay ku soo rogtay wasaaradda maaliyadda Puntland.
Illaa 18 eedeysane ayaa saakay la hor geeyey maxkamadda derejeda koowaad ee gobolka Nugaal, kuwaas oo ku eedeysan dembiyo kala duwan, kamana soo hor muuqan maxkamadda wax qareen ah uu u doodayey dadkaas, iyadoo qaarkood xukunno lagu riday, halka kuwo kalena dib loo dhigay kiiskooda.
Faah-faahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dab ka kacay warshad ku taalla koonfurta Muqdisho